‘थारु अधिकार’ कटौति भएको भन्दै थारु सभासदद्वारा संघर्ष गर्ने चेतावनी – Tharuwan.com
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका थारु सभासदहरुले एक भएर थारु अधिकारको बारेमा संविधानसभाभित्रै संघर्ष गर्ने बताएका छन्। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेशी सहभागिताको विषयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा थारु सभासदहरुले त्यस्तो बताएका हुन्। नयाँ संविधानको मस्यौदाले आदिबासी थारुको अधिकांश अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाउँदै सभासदहरुले संघर्षको विकल्प नरहेको तर्क गरे।
सभासद नगेन्द्र चौधरीले प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुको अधिकार छुटेको भएपनि मुटुमाथि ढुंगाराखेर स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको बताए। नयाँ संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न अझै समय रहेकाले त्यसकालागि सबै लाग्नुपर्ने तर्क गरे। संख्यात्मकरुपमा ४२ जना थारु सभासद संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेपनि साझा मुद्दामा एक हुन नसकेकै कारण दवाव नपुगेको उनले बताए।
सभासद गोपाल दहितले मातृभाषामा सूचनाको हक पहिले सहमति भइसकेको भएपनि मस्यौदाले खारेज गरेको आरोप लगाए। सामूहिक पहिचानको हक अभ्यासमा रहे पनि मस्यौदाले त्यसलाई नामेट गरिएको उनले बताए। थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका दहितले प्राकृतिक स्रोत साधन, जल जमिनमा समेत आदिबासीको पहिलो हकलाई समेत मस्यौदाले वेवास्ता गरेको प्रष्ट पारे।
सभासद जनकराज चौधरीले संविधानको सबै धारा उपधारामा समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। प्रस्तावनामा सो व्यवस्था राखेर अन्य भागमा नआउनु शंकास्पद रहेको आरोप लगाए। जिल्ला पालिकालाई नमान्ने व्यहोरा उल्लेख भएपनि जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिनुले अस्पष्टता आएको बताए।
सभासद वैजनाथ चौधरीले केही भएपनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विषय संस्थागत हुन गइरहेकाले त्यसमा खुशी हुनुपर्ने बताए। परिवर्तन चाहने वा नचाहने बीचको लडाई अहिले चलिरहेको बताउँदै उनले संविधान समयमै बन्नु राम्रो पक्ष भएको बताए। सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुंग्याएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो गर्दा संविधान नबन्ने हो पो कि भन्ने चिन्ता रहेको चर्चा गरे। संवैधानिक अङ्गमा पुनरनियुक्तीको व्यवस्था उचित रहेको उनले बताए।
सभासद तेजुलाल चौधरीले थारु सभासदहरुले साझा धारणा बनाएर गएमा संविधानमा छुटेको विषय परिमार्जन गर्न सक्षम रहेको बताए। ‘सिमाङ्कन, नामाङ्कन, सामुहिक सहभागिता, समानुपातिक समावेशीता लगायतका विषयमा एकमत बनाएर जाउँ हामी सफल हुन्छौं,’ चौधरीले भने। पार्टी ह्वीपमा अल्झेर अधिकार पाइँदैन भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद चौधरीले संवेदनशील बेला आएकाले पार्टीबाट माथि उठेर लड्नुपर्ने सभासदहरुलाई आग्रह गरे।
सभासद सन्तकुमार थारुले मस्यौदाले राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित्ता नगरेको आरोप लगाए। आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुनिश्चित् गरेको भएपनि मस्यौदामा नआउनु दुःखद भएको बताए। थारुको अधिकारकालागि सबै थारुको भावना र विचार एउटै हुनुपर्ने उनले चर्चा गरे।
सभासद अमनलाल मोदी थारुले अन्तरिम संविधानमा आएको विषयलाई मस्यौदाले छाडेकाले संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। अधिकारकर्मी सुशील चौधरीले लामो समयपछि बन्न गइरहेको संविधानलाई पुनः संक्रमणउन्मुख किन बनाउने भन्ने जिज्ञासा गरे।
सभासद गौरी शंकर चौधरी, मानपुर चौधरीले थारु आयोग गठनमा एक भएर लड्नुपर्ने बताए। कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा सभासदहरुले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै थारुको जनसंख्या पनि त्यही जिल्लामा सबैभन्दा वढी भएको बताए। पार्टीको ह्वीपले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै उहाँहरुले संविधानसभामा लड्नुको विकल्प नरहेको बताए।
सभासद योगेन्द्र चौधरी, बलवीर चौधरी, गंगा थारु, विश्राम चौधरी, बुद्धिसागर चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, लक्ष्मी चौधरी, डिल्ली चौधरी, मानपुर चौधरी, कृपाराम रानाथारु, मञ्जु चौधरी, थारु अगुवा सुरेन्द्र चौधरी, अन्जना चौधरीलगायतले थारुको अधिकारका लागि एक हुनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।
अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारुले प्रारम्भिक मस्यौदामा समानुपातिक समावेशीता शब्द उल्लेख गरेको भएपनि बाँकी धारा र उपधारामा समावेशी मात्र शब्दावली राखिएकाले आदिबासी थारु, जनजाति, महिला, मधेसी, मुश्लिम र पछाडि परेका वर्गलाई झुक्याउने प्रयास गरिएको बताए। सहभागीताको हक हुनेछ भन्दा पनि प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
ज्याभ्लिन थ्रोमा एपिएफकी सिमाकुमारी थारुको कीर्तिमान
5 thoughts on “‘थारु अधिकार’ कटौति भएको भन्दै थारु सभासदद्वारा संघर्ष गर्ने चेतावनी”
समाचार पढेर खुशी लाग्यो । बास्तवमा तपाईहरु जुनसुकै पार्टीबाट प्रतिनीधित्व गरेपनि थारु भएका कारण प्रतिनीधित्व गर्नु भएको हाे । त्यसैले थारुहरुको हक अधिकारको लागि लड्नु तपाईहरुको कर्तब्य हो । अब पार्टीलाई जनअधिकारको बली चढाउने या जनताको अधिकारको लागि पार्टी ह्वीपलाई समेत नाघ्ने ? यो अधिकार यहाँहरुमा सुरक्षित छ । जनता र समाजसेवी बुद्धिजीविहरुले त अपेक्षा गर्ने हो बोलिदिने हो । ब्यबहारमा उतार्ने जनताको भबिष्य कोर्ने डाडु पन्यु यहाँहरुको हातमा छ ।
Photo mai cheating.wa wa reporter ji pit pitpatrakareka garnay?fact k ho nagrik ko rights ho Mann nay .
थारुहरुको हक अधिकारका लागि हाम्रा बाजे बराजु देखि निरन्तर संघर्ष गर्दै यहाँ सम्म आइपुग्दा, अव यो हक र अधिकारको अव बन्ने संबिधानमा सुनिस्चित गर्नका लागि वास्तविक लडाई तपाई हरुले एक ढिक्का भएर गर्नु पर्ने दायीत्व तपाईं सभासद ज्यू हरुमा रहेको ले कुनै हालतमा पनि पछि न हट्न सम्पूर्ण थारु समुदायको तर्फ बाट हार्दिक अनुरोध छ…
Thanks for news coverage
कर्णप्रिय समाचार सुनियो। अलिकति मुटु हाँस्यो। थारुको हक अधिकार र पहिचानको लागि तपाई सभासदहरुले आफ्ना आफ्ना दलिय स्वार्थ तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागी अगाडि बढ्नुहोस्। थारुको साझा मुद्दा बनाएर एक भएर जाऔं/जानुहोस्। हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, भन्नुहोस्। आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न पछि हट्ने छुइँन। तर यहाँ माननिय सभासद श्री बैजनाथ चौधरी जीको कुरामा पावर देखिनँ। वहाँले पार्टी व्हीप देखि डराएर बोल्नु भएछ। उहाँले एमालेले जे बोल्छ, हुबहु उस्तै बोल्नु भएछ यहाँ निर। कमसेकम थारु सभासदहरुसंगको मिटिङमा जोरदार थारुको मुद्दाको पक्षमा नयाँ निर्णय गर्नु सक्नु पर्थ्यो। मलाई थाहा छ, बैजनाथ चौधरी जी एक वरिष्ठ बुद्धिजिवी तथा थारु समाजमा विद्वान हुनुहुन्छ तथापि थारुको मुद्दालाई किन यति कमजोर पार्ने कुरा बोल्नु हुन्छ? आशा छ, यो कमेण्ट जरुर मा.सभासद श्री बैजनाथ चौधरी जी ले हेर्नुहुनेछ र केहि राम्रो कुराहरु लिएर हामी थारुको लागि आउनु हुनेछ।
जय आदिबासी थारु! जय थारुवान (थरुहट)!! जय नेपाल!!!